Shirkadda Dahabshiil waxay tusaale u tahay Ganacsiga Soomaalida ee ka soo doogey colaadaha”. | Berberanews.com
Home WARARKA Shirkadda Dahabshiil waxay tusaale u tahay Ganacsiga Soomaalida ee ka soo doogey...
Shirkadda Dahabshiil waxay tusaale u tahay Ganacsiga Soomaalida ee ka soo doogey colaadaha”.
“Warbixin xiiso badan oo uu Maamulaha Guud ee Shirkadaha Dahabshiil ka qoray suxufiga Magnus Taylor oo ah Royal African Society website manager & online editor”
Hargeysa(Berberanews):-Cabdi-rashiid Maxamed Siciid Ducaale waa Maamulaha Guud ee Shirkadaha Dahabshiil. Dahabshiil waxay ka mid tahay shirkadaha u waaweyn caalamka ee dhinaca isu-gudbinta lacagaha, gaar ahaan Geeska Afrika.
Previous articleSomaliland Journalists Watchdog condemns the apprehension of two reporters
Next articleFuritaanka Shirka Somalida London, Nuxurka Khudbadihiii Madaxda adduunku ka jeedisay iyo Cameron oo si gaara khudbadisa ugu soo qaatay Somaliland